Wararka - Astaamaha iyo halista hababka sahayda hawada shaybaadhka
Astaamaha iyo halista hababka sahayda hawada shaybaadhka
1.Features nidaamka sahayda hawada shaybaarka:
1.1 Astaamaha: Shaybaarku waxa uu u baahan yahay socodka gaaska qaade ee joogtada ah, gaaska saafiga ah oo sareeya, waxa uuna bixiyaa gaas lagu falanqeeyo qalabka shaybaadhka si uu u helo tiro iyo gaas degan.
1.2 Dhaqaale: Dhisidda dhululubada gaaska xoogga leh waxay badbaadin kartaa meel bannaan oo xaddidan, looma baahna in la gooyo marka la beddelayo dhululubada si loo hubiyo sahayda joogtada ah ee gaaska.Isticmaalayaasha kaliya waxay maamulaan dhululubo yar, waxay bixiyaan kirada dhalada birta ah ka yar, sababtoo ah dhammaan dhibcaha la isticmaalo ee loo isticmaalo gaaska isku midka ah waxay ka yimaadaan ilo gaas isku mid ah.Habka sahayda noocan oo kale ah ayaa ugu dambeyntii hoos u dhigi doona gaadiidka, hoos u dhigista qadarka gaasta dib u dhigista ee dhalada hawada ee shirkadda gaaska, iyo sidoo kale maareynta dhululubada wanaagsan.
1.3 isticmaalka: Nidaamka sahayda tuubooyinka dhexe waxa uu dhigi karaa meelaha gaaska laga isticmaalo, sida goob shaqo oo nashqad leh oo macquul ah.
1.4 amniga: si loo hubiyo kaydinteeda iyo isticmaalkeeda amniga.Waxay ka ilaalisaa tijaabiyaha falanqaynta inuu ku xadgudbo sunta iyo gaaska waxyeelada leh ee tijaabada ku jira.
2. Khatarta gaasta shaybaadhka
2.1 Gaasaska qaar ayaa leh ololi kara, qaraxyo, sun ah, daxal xooggan, iwm., marka ay daadato, waxay dhibaato u geysan karaan shaqaalaha iyo qalabka.
2.2.Gaasyo kala duwan ayaa lagu isticmaalaa isla deegaan.Haddii ay jiraan laba gaas oo leh falcelin kiimiko oo xooggan sida gubasho ama qaraxyo, waxay dhaawac u geysan karaan shaqaalaha iyo qalabka.
2.3 Inta badan dhululubada gaaska waa ilaa 15MPa, kuwaas oo ah 150 kg / cm2, haddii aaladda decompression dhalada hawada ka baxsan aaladda depression, waxaa suurtagal ah in la saaro qaybo ka mid ah, iyo tamarta ay leedahay dhaawac halis ah oo soo gaaray jidhka bini'aadamka ama qalabka..
Xaaladaha iyo u diyaargarowga cadaadiska tijaabada tuubada farsamada
Nidaamka dhuumaha waa la dhammaystiray oo waafaqsan shuruudaha naqshadeynta iyo xeerarka.
Laantii, hangarkii iyo tuubooyinkii waa la dhammeeyey, cilad-sheegiddii raajadana waxay si dhammaystiran u gaadhay heerkii naqshadaynta, qaybta tijaabada, alxanka iyo kuwa kaleba waa in la tijaabiyaa aan la rinjiyin oo aan la tallaalin.
Qiyaasta cadaadiska tijaabada ayaa la xaqiijiyay, saxnaanta ayaa loo dejiyay 1.5, iyo qiimaha miisaanka buuxa ee miiska waa inuu noqdaa 1.5 ilaa 2 jeer cadaadiska ugu badan ee la qiyaasay.
Imtixaanka ka hor, nidaamka tijaabada, qalabka iyo lifaaqyada kuma lug yeelan doonaan nidaamka tijaabada, iyo booska guddiga indhoolaha waxaa loo isticmaalaa in lagu dabaqo calaamadda lacquer cad iyo rikoodhka.
Biyaha tijaabada ah waa in lagu isticmaalo biyo nadiif ah, iyo waxa ku jira chloride ion ee biyaha waa in aanu dhaafin 25 × 10-6 (25 ppm).
Dhuumaha ku meel gaadhka ah ee tijaabada waa la xoojiyay, waana in la hubiyaa badbaadada iyo isku halaynta.
Hubi haddii dhammaan valves-ka tuubada ay ku yaalliin gobolka bannaan, haddii meelaha bannaan lagu daray, iyo in xudunta waalka soo celinaysa la saarayo, ka dib nadiifinta dib ayaa loo dajin karaa.
Waqtiga boostada: Febraayo-23-2022